FXPRIMUS waxay ogtahay in ganacsatadeedu ay u baahan yihiin gelitaan degdeg ah akoonadooda ganacsi, goob kasta oo ay ka joogan caalamka, iyo wakhti kasta oo maalinta ah. Sidaas awgeed, waxaan bixinaa barnaamijyada ugu waxqabadka fiican, uguna awooda badan haday website tahay, tablet ama mobile.Baadh boggayaga iyo adeegyadeena kala duwan, oo isla markiiba ku soo degso aaladda aad dooratay.
Xawaaraha ugu sareeya iyo nidaaamka iswaydaarsiga xogaha maaliyadeed ee ugu muhiimka u ah khibradaada ganacsi.
Alaabtaan gaarka ah waxay siineysaa galaangal suuq oo toos ah macaamiisheenna doonaya inay isticmaalaan nidaaamka iswaydaarsiga xogaha maaliyadeed (‘FIX Protocol’) ee muhiimka ah waxkabadalida khibradahaaga ganacsi. Dhigaalka ugu yari waa $50,000 iyo shuruudaha margin-ka FX, Dahabka, Qalinka iyo Saliida ayaa ah mid hoose oo 1%
FAA’IDOOYINKA GANACSIGA FIX/API:
Awooda isticmaalka noocyada kala duwan ee orderka sida Dalabyada Suuqa (Market Orders) ama Dalabyada Xaddeynta (Limit Orders)
Yaa ka faa’iidaysan kara ka ganacsiga Platinum API?
Macaamiishayada sameeya ugu yaraan dhigaal ah 50,000 doolar ayaa u qalma inay dalbadan Platinum API.
Macaamiisha Tafaariiqlayda/haayadaha ah kuwaas oo hanaqaaday ama horumarinaya moodhaliska ganacsigooda
Dilaalada tirtiraya khatarta sarifka isku bedelka ee positions-ka equity-ga.
Macaamiisha doonaya inay sii wataan qarinta nidaamyadooda otomaatika ah.
Hay’adaha daneynaya inay kala duwanaan lacagahoooda iyadoo ay ugu wacan tahay balance sheet-koodu ama caqabado kale oo jira